प्रिय प्रचण्डलाई पत्र... (A Letter ofaNepali Citizen to Comrade Prachanda) |The Peace Post
प्रिय प्रचण्डलाई पत्र... (A Letter ofaNepali Citizen to Comrade Prachanda)
[Published in the Nagarik National Daily on 29 April, 2010]
आत्मीय दाजु प्रचण्ड,
तिमीलाई यो पत्र लेखिरहँदा पर जुगल हिमालमा एक धर्र्सो घामको किरण देखिएको छ । बिहानीको संकेत दिँदै बासेको भालेको डाक म स्पष्टै सुन्न सक्छु । तिमी र म एउटै उपत्यकाभित्र हुनाले यो तिमी पनि भोग्दैछौ होला । तर सुन्दैछु पश्चिमतिर लाठि प्रशिक्षण चल्दैछ रे, अनि पूवतिर खुकुरी तालिम । यत्ति भन्न पत्र कोर्दैछु कि मध्याहृनमै रात पर्ला भनी नडराऊ । म छु । तिमी छौ । यति धेरै नेपाली छन् जसले यो दिन देख्न कति रगत पसिना बगाएका छन् । घर भित्रिसकेपछि सिँगार्नतर्फ लाग्नुपर्छ दाजु । भत्केको देखेर जस्केलो खोज्न होइन ।
दाजु ! यो हप्तैभरि अखबारका पाना भाटा समाएका युवाका तस्विरले भरिएको छ । रेडियो र टेलि-भिजनले पनि त्रासैत्रासको खबर ओकलेका छन् । संविधान लेख्न भनी जनताले भोट हालेका थिए । तर शान्तिका लागि चुनिएका तिनै सभासद्ले अहिले लडाइँको प्रशिक्षण दिएको सुहाउँछ र दाजु - तिमी रातो झण्डा बोक्छौ र रातै भाषण गर्र्छौ । रातो त रगत पनि हुन्छ । गुराँस पनि हुन्छ । तर रगतलाई नदेखिएकै सुहाउँछ, गुराँसलाई देखिएको । जनताले तिमीबाट गुराँसजस्तै क्रान्ति खोजेका छन्, रगतजस्तो होइन ।
सम्झ त ती दिनहरु । समय निकै पीडादायी थियो । रात छिप्पिसकेको हुन्थ्यो । तर पनि तिमी आउँछौ भनी आमा अबेरसम्म अगेना र कसौँडी कुरेर बस्थिन् । वरिपरि कतै डाङडुङमात्रै सुनिए पनि त्यो वर्षौभरि अबिर-अक्षता नचल्ने हो कि भन्ने पिरले सताउँथ्यो । सबै गाउँले विस्मयको त्यो ननिको घाउ मेटाउन चाहन्छन् । खुकुरी त के खुर्पेटो पनि बोक्नु नपरोस् भन्छन् । तर गाउँ फेरि त्रासदिमा रुमल्लिएको छ । भाटेकारवाहि र शत्रुविनाशका आवाज फेरि सुनिन थालेका छन् ।
सुन्दैछु, आफै भोका भएका जनतासँग अन्न मागिएको छ रे । ऋणले सताइएकाहरुसँग पनि चन्दा दिन भनिएको छ रे । जे नै भए पनि हामी नेपाली इलम गरेर खाने जात हौँ । बन्दुक र खुकुरी बोक्नेलाई गाँसै काटेर दिन त गक्षले पनि कहाँ भ्याउँथ्यो र ? परिवर्तन जनताकै लागि हो भने त्यसको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । होइन भने जनताले त्यसमा अपनत्व भेट्दैनन् दाजु ।
अहिलेको युगमा पनि बलबुताले मात्रै सत्ता सम्भव छ भन्नु किमार्थ सत्य होइन । न त अब सबैलाई बन्दुकमात्रै परिवर्तनको कडि हो भनी झुक्याउन सकिन्छ । लिङ्कनले भनेका कुरा मैलेभन्दा पहिले तिमीले नै पढ्यौ होला "केही जनतालाई सबै समय झुक्याउन सकिन्छ । सबै जनतालाई पनि केही समय झुक्याउन सकिन्छ । तर सबै जनतालाई सबै समय झुक्याउन सकिँदैन ।" कब्जा त सत्तामाथि होइन, आफ्नै मनमाथि लिए राम्रो हुने हो, हैन र दाजु ?
त्रिसठ्ठी सालको त्यो मंसिर महिना । तिमीले सबैसँग मिलेर शान्ति ल्याउँछु भन्दा गाउँले हौसिएका थिए । ढिकुरपोखरीका पाखाभरि पैँयु फुलिरहेका थिए । सम्झौतामा दस्तखत गर्न तिमी उपत्यका ओर्लिँदा अब त देश उकालो लाग्ने भयो भनी सबै रमाए । माइतिघरदेखि मान्मासम्म दीप बल्यो । त्यो समय नेपालीको शान्तिपथ देखेर सारा मुलुकले आर्श्चर्यले मुख आँ पारेका थिए । त्यो इज्जत अहिले सियोको टुप्पोमा पुगेको छ । खस्न दिनुहुन्न दाजु ।
तिमी ढिकुरपोखरीमा जन्मिएका थियौ । म त्यही तलको पोखरामा । अझै सम्झन्छु, तिमी सिपाही हुँदा म सानै थिएँ । त्यसैले सिपाहीले मिठाइ ल्याउँछन् भनी पर्खन्थेँ । तिमी अहिले सिपाही छैनौ । र म पनि अब सानो छैन । बुझने भइसकेँ । त्यसैले सिपाही नभएका दाजुले मात्रै शान्ति ल्याउँछन् भनी पर्खिरहेको छु । यो आशाको त्यान्द्रो नचुँडियोस् ।
निधारको सप्तरंगीमा एउटै पनि रङ खस्यो भने पूरै टीका बिटुलो हुन्छ । उहिले सातैथरी मिलेर आन्दोलन गरे । त्यसैले अहिले पनि सातै विचार त पक्कै आएका छन् । सातै दलका राम्रा रङ मिलाएर संविधान बनाऊ । नयाँ संविधान इन्द्रेणीजस्तै होस् । सोच त दाजु, इन्द्रेणीमा एउटै पनि रङ छुट्दो हो त कति अपूरो हुन्थ्यो त्यो । हाम्रो देश पनि त्यस्तै छ । जनताका चाहना थरीथरी छन् । सबैलाई मिलाएर केही बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास अझै टुटेको छैन । आखिर उही ठाउँमा नयाँ केही लेख्न पुरानो केही त मेट्नै पर्छ । हो, त्यसैले म गोलीका सम्झनाहरु बिर्साउन पाखुराका दाग मेट्दैछु । तिमी विश्वास गर या नगर, बन्दुकको नालले बाँसुरीको धून कहिल्यै पनि सुनाउन सक्दो रहेनछ ।
दसौँ वर्षदुखेको घाउमा अहिले अलिकति मलमपट्टी हुँदैछ । हो, गर्न बाँकी अझै धेरैथोक छन् । तर तरिका नै बदल्ने बेला त होइन होला यो । तिमी त युवालाई राम्रोसँग फकाउन सक्छौँ । प्रेरित पनि गर्न सक्छौ । त्यही अब्बल गुणको प्रयोग गरेर दलका नेतालाई फकाऊ । सम्मति र सहमतिको बाटोमा हिँड्न मनाऊ । तिम्रो सुरिलो चोर औँलालाई हेर त । त्यो औँलो टुँडिखेलमा धेरैपटक दुत्कार्न ठडिएको छ । बरु त्यसलाई सु-बाटो देखाउनमा प्रयोग गर । सानोमा तिमीले मलाई ताते गर्दै हिँडाएको सम्झन्छु । हो, त्यो चोर औँलालाई ताते गर्ने काममै लगाऊ, शत्रुलाई पख्लास् भन्नमा होइन । मजस्ता धेरै भाइबहिनी तिमीजस्ता धेरै नेताले देशलाई संयमी बाटोतर्फ डोर्‍याउलान् भन्ने आशामा छौँ । यो आशाको दियोमाथि विद्रोहरुपी हुरी नबलोस् ।
माओ त्सेतुङ्गले "युद्ध भनेको राजनीतिकै निरन्तरता हो" भनेका छन् । त्यो हुन सक्छ । हामीले भोग्यौँ पनि । तर राजनीति भनेको चाहिँ युद्धको निरन्तरता हुनुहुँदैन । एकचोटि आयो । धेरै सिकायो । तर अब फेरि होलेरी नफर्कोस् । दोरम्बा नदोहोरियोस् । बेनी र तानसेन नबल्झुन् । तिमी चिटिक्क परेका छौ दाजु । देशलाई पनि चिटिक्क पार ।
देशै त्राहिमान् हुँदा मनको कुरा नखोली रहन सकिनँ । अहिलेलाई परिक्षा नजिकिएकोले मैले धेरै पढ्नु छ । झिसमिसे नै भए पनि परिवेश अँध्यारो छ, देशजस्तै । बत्ति पनि छैन । यो बेला लोडसेडिङजस्तै दिक्कलाग्दो भएको राजनीतिक दलबीचको दूरि चाँडै घटोस् । अँध्यारै भए पनि यो तिम्रो पनि परिक्षा हो । इतिहासले तिमीलाई यतिबेला गहिरिएर जाँच्दैछ । अनुत्तिर्ण हुनुहुँदैन । तिमी त मभन्दा पनि जेठो । आमाले भन्थिन्, मैलेभन्दा धेरै भोटो फटाएका हौ रे । आफै पनि बुझने छौ । भाले बासिसक्यो दाजु । ढिलो-चाँडो बिहानी त हुन्छ नै । त्यसैले आमाको बिन्ति छ रे ! घाम उदाएन भने खुकुरी उदाउँछु नभन ।
Madhab Saturday, May 1, 2010 at 12:20:00 PM GMT+10
dherai raamro safal, keep writing....
Amit Rijal Saturday, May 1, 2010 at 12:50:00 PM GMT+10
Safal Katti raamro kuraa padhna paaye maile Dherai Pachhi ... words with incredible power, emotions with accountable reservation
prawash Saturday, May 1, 2010 at 9:04:00 PM GMT+10
सफल जीको पत्रमा राष्ट्र पुकार पाएँ।एक्दमै मन छुने पत्रको रचना भएको छ ।
Anonymous Sunday, May 2, 2010 at 5:44:00 PM GMT+10
Anonymous Friday, May 7, 2010 at 5:14:00 PM GMT+10
Anonymous Friday, May 14, 2010 at 12:43:00 AM GMT+10
Anonymous Monday, May 24, 2010 at 10:52:00 AM GMT+10
佳俐 Monday, May 31, 2010 at 8:10:00 PM GMT+10
07_TeddyF_Silvey0 Wednesday, June 9, 2010 at 6:22:00 AM GMT+10
Anonymous Saturday, June 12, 2010 at 4:33:00 PM GMT+10